Fifidianana FMF: nivoaka ny daty vaovao | NewsMada
Fifidianana FMF: nivoaka ny daty vaovao
Tapaka, taorian’ny fikaonandoha nataon’ny kaomisiona mpanatanteraka eo anivon’ny federasiona malagasy ny baolina kitra sy ny kaomisiona mpikarakara ny fifidianana, omaly, fa ny 24 novambra izao ny daty vaovao hanatanterahana ny fifidianana ho mpitantana ny FMF. Raha ny fantatra, any Mahajanga ny hanaovana izany.
Ho fantatra amin’ity volana ity izay ho filohan’ny FMF, raha tsy misy ny sampona. Ho tratra ihany koa ny fe-potoana nomen’ny eo anivon’ny Fifa ny amin’ny tokony hahavitan’ny fifidianana mialoha ny 15 desambra izao. Mbola andrasana anefa ny fahatontosan’izany amin’ny antsakany sy andavany.
Mandritra ity fifidianana ity, miantso ny filoha mpitantana ny ligy rehetra manerana ny Nosy izay miisa 22, ny mpitantana mpisolo toerana ny federasiona, tarihin’Andriamiasasoa Doda, ho tonga hanatrika sy hifidy amin’io 24 novambra io. Halefa miandalana ihany ny fandaharam-potoana rehetra mandritra izany sy ny fandaminana amin’ny ankapobeny, raha ny fanambarana navoakan’ny FMF.
Ity ny daty fahatelo napetraka hanaovana ny fifidianana, raha atao ny jery todika. Raha tsiahivina, ny 3 novambra lasa teo ny daty voalohany fa noho ny olana maro nosedraina tany Sambava, dia tsy tanteraka izany. Ny 5 novambra kosa ny andro faharoa, saingy mbola nandamoka ihany na dia teo aza ny fanelanelanana nataon’ny teo ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, ka nanaovana ny fihaonana teny Mahamasina. Fihaonana izay nahitana ny solontenan’ny CAF sy ny FIFA ihany koa. Antenaina, araka izany, fa hahitam-bokany izao fanemorana fahatelo izao ka ho fantatra mandritra io fotoana io ny ho filoha mpitantana ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra. Manantena ny tsy hisian’ny olana ihany koa ny mpilalao Barea an’i Madagasikara sy ireo mpankafy ny baolina kitra eto Madagasikara.